Tsanangudzo:Mobile Solar Energy,Off Grid System,Power Generation Systems
Kubudirira: Can meet customer needs
Solar power generation system inonzi solar crystalline silicon panorama yezuva yakaitwa nemasero anoshanda ezuva. Kufambisa simba rezuva. Off-grid system.
Bhatiri inotengeswa pasi pezuva, uye ikozvino yakananga yebhateri inoshandurwa kuva ikozvino 220V inoshandiswa inowanzoshandiswa muupenyu hwedu hwezuva nezuva kuburikidza ne inverter system, kana kuti zvakananga zvakabuda 12V zviri pachena zvino zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekutarisa dunhu. Power generation generation systems
Inonyanya kushandiswa pakufambisa mumunda, vanhu vanoenda kune dzimwe nyika, mhuri, vanhu vane zvikepe, zvitsuwa, kukanganisa kana kusina magetsi, nzvimbo dzakatambira sarudzo dzinotambira, nzvimbo dzemazhizha, masango ekucherechedza masango, nzvimbo dzomuganhu, nezvimwewo.
Simba rezuva ndiro simba guru uye simba rinogona kushandiswa.
Inopfuma mune zvigadzirwa, kusununguka kushandiswa, pasina kutakura, pasina kusvibiswa kune zvakasikwa. Yakagadziridza hupenyu hutsva hwevanhu, uye yakaunza hurumende nevanhu kuvanhu munguva yekuponesa simba uye kuderedza kusvibiswa.